Urban Trial Nzvimbo yekutamba: yakaburitswa musi iwoyo weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Urban Trial Playground - yakaburitswa musi iwoyo weLinux
Urban Trial Nzvimbo yekutamba inosvika musi iwoyo weLinux zvakare, nezve mamwe mapuratifomu. Chimwe chinhu icho vanoshandisa chikuva cheLinux vanokoshesa uye vasinganonoke semazuva ese mune zvimwe zviitiko. Kune avo vasingazive, iwo mutambo weguta wekuyedza vhidhiyo, sezvaungaona mumufananidzo wepamusoro. Unogona kuchovha midhudhudhu kuburikidza neguta uye kuita akateedzana stunts uye zvakapusa izvo zvinokuisa iwe pamuedzo.
Tate Multimedia anga ari mutariri wekutanga Urban Trial Playground nerutsigiro rweLinux. Ndiwo wechipiri mutambo wevhidhiyo wakaburitswa zviri pamutemo weLinux kubva kune ino yekuvandudza studio, ichangopera iyo inoshamisa uye yakanaka Simbi Rats iyo yakatoburitswa kare uye yanga ichibudirira. Kana iwe uchirangarira, ndiwo mumwe musoro une protagonist zvakare ari midhudhudhu, sezvazviri nyaya iyo yatinopa izvozvi.
MuUrban Trial Playground unogona kushandisa midhudhudhu munzvimbo dzemadhorobha mune iro guta revhidhiyo. Izvo hazvina kufanana nemamwe akafanana mitambo yemavhidhiyo yemusoro iwoyo, senge Ubisoft's, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti iri diki studio uye zita remuIndie, kuti vanofarira kufarira zvakanyanya. Aya marudzi emitambo haashamise nekuda kwemajini avo mega graphic, nekuda kwechokwadi kwavo kana nekuda kwekutumirwa kwetekinoroji, asi nekuda kwemashoko akasiyana ayo anowanzo kuzadza vatambi.
Zvakanaka, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve uyu mutambo uye tanga Iye zvino kuti uedze, unogona kuenda kuchitoro cheValve, iyo inozivikanwa Steam, senguva dzose. Ikoko iwe unowana zvese zvaunoda. Nenzira, iwe ikozvino une 30% kuderedzwaHandizive kana ichatora nguva refu, saka kurumidza nekuti kungodarika € 4 unogona kuiwana. Pasina iyo dhisikaundi, mutengo unokwira kusvika ku € 6,99, unova iwo mutengo unodhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Urban Trial Playground - yakaburitswa musi iwoyo weLinux
WireGuard inopa MaharaBSD gadziriso uye mamwe ma tweaks
Microsoft Edge paLinux? Inotaridzika padhuze kupfuura nakare kose